Umhla My Pet » Ukufumana A Pet Sitter
ukubuyekezwa: Apr. 05 2020 | 3 min ukufunda
Ixesha elizayo wena hamba, nokuba ngenxa ishishini okanye ukuzonwabisa, ungafuna ukuqwalasela kuqesha i pet ukusala ukuze angene ekhayeni lakho ukuze banyamekele nezilwanyana. Eziqeshe iinkonzo ukusala pet ngobuchule iya kuvumela izilwanyana wakho ukuba uhlale kakuhle ekhayeni lakhe, kukunika uxolo lwengqondo esazi nguye ekhuselekileyo ezandleni esikwaziyo, kwaye sinokukukhulula uxhomekeke ekubeni abahlobo okanye izalamane. Ngaphambi kokuba isandla sakho phezu izitshixo zakho azitshangatshangise ntle Rover and Fluffy nangona, kuthatha ixesha ukuba zifundise malunga Nina yezilwanyana kunye neenkonzo ezibonelela. Udliwano ezimbalwa Nina pet, ukwazi kubo bit, kwaye abuze imibuzo. Fumana ulwazi namava abo, kangakanani ke Ndiza kutyelela nezilwanyana zakho, utyelelo elide kangakanani wokugqibela, ukuba baza kwenza ntoni ngexesha nezilo zakho, indlela Ndiza iphathe kaxakeka, kunye nemirhumo. Ukongeza ulwazi ngokubanzi malunga neenkonzo zabo, uya ofuna ukuyifundisa iingongoma ezimbalwa ezibalulekileyo kakhulu, njengoko zidweliswe apha ngezantsi.
– Inshorensi kunye / okanye nimanyane: Oku kuya kuthintela iingozi ingenzeki kodwa uya kukukhusela kunye pet ukusala ukuya kumlinganiselo othile kufuneka kwenzeke eyehlele. Uninzi abanini mashishini ke inshorensi, kunye neenkonzo ezininzi abaqashe Nina isilwanyana ukuba kukho kwaye ikhuselwe. Akukho nto asiyongcamango ilungileyo ukubuza ukuba ubungqina inshorensi.
– amalungiselelo yonxunguphalo Pet: Ukuba isilwanyana sakho uyagula xa sele kude, iyakuba kubalulekile ukusala yakho pet ukwazi ngawaphi amanyathelo ukuba xa ku nga fi. Yena kufuneka iinkcukacha zoqhagamshelwano ugqirha wakho, kunye nohlobo zonyango kunye / okanye izixa ukugunyazisa ukuba akana kuqhagamshelwa.
– Pet iinkqubo ukusala likaxakeka: Buza ngawaphi amanyathelo aza kuthathwa ukuba pet ukusala wakho uyagula kwaye singakwazi ukunyamekela nezilwanyana, ukuba yena okanye yena akakwazi ukuya kwikhaya lakho ngenxa yemozulu engentle, okanye xa kuthe ziintlekele zemvelo.
– yokhuseleko: Cela isitshixo iya kuchongwa ze igcinwe ngayo. Iindlela kufuneka iqhotyoshelwe nantoni igama lakho okanye idilesi kuyo, kwaye xa singasetyenziswa, ngokuthandekayo kufuneka igcinwe ikhuselekile kwindawo ebiyelweyo etshixiweyo ekhuselekileyo okanye ezinye ekhuselekileyo. Kwakhona, inkoliso amashishini pet ehleli izakunika ukugcina isitshixo sakho pet ehleli izabelo elizayo.
– Izivumelwano kunye nezinye iintlobo: Qiniseka ukuba pet ukusala wakho ikubonelela isivumelwano ebhaliweyo ecacisa izinto ezifana nemihla, amaxesha, iinkonzo ekuvunyelwene, iinkqubo likaxakeka, yokhuseleko, amazinga, etc.
– Ucaphulo: Cela amagama qhagamshelana ulwazi ukuze abathengi abambalwa. Thatha ixesha lokuthetha kwaba bantu ucele ngamava abo ukuba okanye hayi kengoku baqesha ukuba pet ukusala ethile kwakhona. Nina abaninzi pet nazo kukuvuyela ukunika iimbekiselo kwezinye iingcali zononophelo pet ezifana bezilwanyana, groomers, okanye nabaqeqeshi.
– pet imiba: Yazisa pet ukusala yakho kuba naziphi na iingxaki zempilo, yokuziphatha nemiba, okanye ezinye izinto ezibalulekileyo malunga nezilwanyana zakho. Ukunika ukusala yakho pet njengoko ulwazi kangangoko unako ngesilo yakho iya kwenza ukuba ukunika eyona nkathalo.
– imiba ekhaya: Njengoko imiba pet, qiniseka ukwazisa ukusala yakho pet nayiphi engaziqhelanga malunga ekhayeni lakho ukuze kuvela xa ungekho wena (toilet iyaphalala, iingcango ukutshixa kakuhle, alarms, njalo).
Ngenxa pet Hlalela inkonzo yobuqu, wena isilwanyana sakho kufuneka ukuba mawuzive mntu nawe kumema ekhayeni lakho. Khangela nemvo lentsulungeko ngokundibamba buqu, qiniseka ukuba ingqalelo imvakalelo yakho emathunjini, kwaye bagcine indlela isilwanyana sakho ukuba ukusala pet nawe udliwano. Kunye nentwana ye amalungiselelo kunye nophando, pet sakho siya kuba nako ukuhlala ngokukhuselekileyo kwikhaya lakhe ngexesha sele kude, kwaye kuya kubakho kubulisa ngolangazelelo kuwe uthando nobubele xa ubuyela.